Griiga - ALinks
Maqaallada ku saabsan Giriigga
Sidee loo helaa fiisada Griiga?
November 29, 2020 Shubham Sharma Greece, fiisada
Waxay kuxirantahay safarkaaga Giriiga, noocyo badan oo fiisooyin ah ayaa lagu dabaqi doonaa munaasabada. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad booqato, waxbarto, ama aad shaqeyso oo aad halkaas ku noolaato, waa inaad dalbataa dalab kale oo Griig ah oo loo yaqaan 'Schengen'
Sidee wax looga bartaa Jaamacada Giriiga.
Waxaa laga yaabaa 7, 2020 Antika Kumari Greece, waxbarasho, safarka
In wax laga barto jaamacad ku taal Giriiggu waxay fursad qaali ah u noqon kartaa ardayda shisheeyaha ah. Safarka ay ku tagayaan waddankan xiisaha lihi waxay ardayda u oggolaanayaan inay is-dhex geliyaan dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan kala duwan, oo ay weheliso jawi kobciya. Griig sidoo kale waa
Sidee Loo Dalbadaa Magangalyo Giriiga?
Waxaa laga yaabaa 5, 2020 Antika Kumari Greece, qaxootiga
Shisheeyaha iyo dadka bilaa dalka ah waxay magan galyo ka dalban karaan Griiga iyagoo u sheegaya maamulada inay raadinayaan magangalyo caalami ah. Kadib gudbinta codsi magangalyo, magangalyo-doonku wuxuu marka hore helaa foom codsi. Ka dibna nuqul ka mid ah baasaboorkiisa sida
Xiriirinta Giriigga Athens, macluumaadka maxaliga ah, caasimada, Tesaloniika
September 20, 2019 Demi Greece, xiriiro waxtar leh
Shabakadaha ama dukumiintiyada ku saabsan Athens. ACCMR (Xarunta Xiriirinta Muhaajiriinta iyo Qaxootiga Athens) Hindisaha ayaa looga golleeyahay isku dubaridka hufan ee u dhexeeya maamulka degmada iyo daneeyayaasha ka shaqeeya magaalada gudaheeda, sida NGO-yada qaranka iyo kuwa caalamiga ah, ururada caalamiga ah, iyo muhaajiriinta
Xiriirimaha Giriigga, websaydhada macluumaadka, kooxaha wada sheekaysiga
September 11, 2019 Demi Greece, qaxootiga, xiriiro waxtar leh
Doc-ka waxaa ku jira macluumaadka griigga Ie xiriiriyeyaasha ama dukumiintiyada dhammaystiran ee ku saabsan soogalootiga iyo qaxootiga. Waxay ka koobantahay dalka oo dhan dhinacyo badan sida magangalyada, guryaha, waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo kuwa kale. Kooxda Macluumaadka Wareegta / Macluumaadka Tabaruceyaasha Athens –XOGTA SHAQAALAHA MAGANGELYADA